YEMILILIK BETAMANGIST Oromoo ofitti dhiheessuu dide!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYEMILILIK BETAMANGIST Oromoo ofitti dhiheessuu dide!!
YEMILILIK BETAMANGIST Oromoo ofitti dhiheessuu dide!!
Kaabinee hanganuma qofa qabaa..?
Moo kaabinee habashaatiif kaabinee OROMOO jechuun bakka lamatti qooddatee..?
Digisiin masaraa mootummaa ilmaan yeroo hundaa kan ilmaan Habashaa qofa ta’eera.
YEMILILIK BETAMANGIST oromoo ofitti dhiheessuu dide
መተከል: የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግሥት የመተከል ኦሮሞ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር መብት ፈቅዶ በትምህርት ቢሮ በኩል ለመተከል
ነፍጠኞች/ኣማሮች በቅማንት ህዝብ ላይ ያደረሱት ኣሣዛኝ ግድያ: Soruce: Maleda Media & OMN